Restaurant Week Na The Netherlands | Save A Train
Home > Travel Europe > Restaurant Week Na The Netherlands
Restaurant Week Na The Netherlands
Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 02/06/2020)
Ọ bụrụ na ị na a na-eme atụmatụ a njem Amsterdam ma ka figuring oge kacha mma na-aga, ị nwere ike chọrọ tụlee a nleta n'oge Restaurant Week 2019 na Netherlands.
Restaurant Week bụ a culinary omume na-ewe ebe kwa afọ n'ụwa nile na 35 isi obodo ndị dị ka Amsterdam, New York, na Hong Kong. The mbụ Restaurant Week mere na New York; kere Tim Zagat, nchoputa nke Zagat Survey, na Joe Baum, akwanyere ùgwù restaurateur.
The izu bụ ịga nke ọma otú ahụ na ọ gbasaa gafee obodo ndị ọzọ gafee n'ụwa. The ụbọchị nke Restaurant Week ịdị iche iche site n'obodo ruo n'obodo; Otú ọ dị, echiche bụ a otu gafee niile ebe. Na-ekere òkè eateries akwalite a izu àjà ehihie na nri abalị ọpụrụiche na mma ahịa.
Ọ bụrụ na ị n'anya nri na gị mmefu ego bụ mmachi, Restaurant Week na-enye gị ohere na-eri nri na n'elu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Amsterdam n'ọnụ ego. Jidere ohere iri na-atọ Le Garage, na Brasserie La Camelia na Okura Hotel, ma ọ bụ ndị Brasserie na Amstel Hotel obere!
The akụkụ kasị mma bụ na National Restaurant Week n'akparamagwa Amsterdam ugboro abụọ n'afọ, ke ini utọ na ọzọ n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ugboro abụọ a afọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ niile The Netherlands nwere izu-ogologo ihe ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ zuru N'ezie nri a nta nke ihe ha ga-a na-eri. Enwe a 3-N'ezie nri abalị maka naanị € 28,50!
odika 135 ụlọ oriri na ọṅụṅụ niile Amsterdam isonye nke na-eme gị nhọrọ hiri nne. The biannual omume Aims ka mfe ahụmahụ. Rie ma ṅụọ na Amsterdam kasị mma iri iche site nlele ha menus maka a ofu price. Ọ dịghị mma oge ị nụrụ ụtọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ mbinye aka efere na ị ga-uzọ ọzọ na-akwụ zuru price n'ihi na n'oge ọ bụla ọzọ oge nke afọ.
Ma tupu ị ga-esi kwa obi ụtọ, ahụwa na i nwere ike dị nnọọ na-eje ije n'ime ndị a ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-atụ anya ka a nọ ọdụ. Reservations bụ a kwesịrị, otú ị ga-akwụkwọ dị ka n'oge dị ka ị pụrụ dị ka ebe ndị a na-jupụta elu ngwa ngwa.
Esi na Restaurant Week na The Netherlands
Ezie na e nwere ọtụtụ nhọrọ maka njem ka i Amsterdam Restaurant Week omume, ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ otu n'ime ndị kasị atọ ụtọ na-akpali akpali ụzọ njem. Ọ na-eme ka dum ahụmahụ ọzọ kwesịrị ncheta dị ka gị njem site Europe, na-ewere na nlegharị anya na rutere gị gastronomic ebe na ụdị na nkasi obi.
Otu ihe ndị kasị mma mgbe ị na Europe bụ na ị na-adịghị mkpa iji agbanweta gị ego, ọ bụ niile ahụ.
Dortmund na Rotterdam Ụgbọ oloko
Paris na Amsterdam ụgbọ okporo ígwè bụ ihe dị ka 3 na ọkara awa mgbe Berlin ka Amsterdam bụ a 6-hour ụgbọ okporo ígwè njem. Book n'oge na zọpụta na tiketi ahịa. Lelee ụbọchị maka Restaurant Week 2019 na The Netherlands otú i nwere ike doputa ụgbọ oloko gị oche n'ọdịnihu na-enwe nnukwu ego. Na nke kacha mma udu na ụgbọ okporo ígwè eme njem na Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/restaurant-week-netherlands/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#restaurant #restaurantweek travelholland nje ndi njem traveltips
Etu ị ga-esi mee njem njem azụmaahịa n'ụzọ ziri ezi
Business Travel site Train, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel UK, Travel Europe